विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? धेरै पैसा बोके पक्राउ पर्नुहोला ? - विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? धेरै पैसा बोके पक्राउ पर्नुहोला ?
विदेश जाँदै हुनुहुन्छ ? धेरै पैसा बोके पक्राउ पर्नुहोला ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २ श्रावण, 03:14:11 AM
काठमाडौँ, २ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा तथा धारक विनिमय पत्रको सीमा निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९ को क अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो साथमा वा कार्गो, कुरियर, हुलाकमार्फत रु पाँच हजार नेपाली वा अमेरिकी डलर पाँच हजारसम्म बोक्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको हो ।
आजदेखि लागू हुने सो नीतिअनुरुप नेपाली रुपैयाँ पाँच हजारसम्म वा अमेरिकी डलर पाँच हजारसम्म वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा र धारक विनिमय अधिकारपत्र नेपालबाट विदेश लैजान र विदेशबाट नेपाल ल्याउन सकिने सीमा निर्धारण गरेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले उल्लेख गरेका छन ।
२०७५, २ श्रावण, 03:14:11 AM